Masar:Maxkamaddii Mubarak oo bilaabantay | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > News, WARARKA	> Masar:Maxkamaddii Mubarak oo bilaabantay
Waxaa hadda bilaabantay maxkamaddii,waxaana ku waheliya laba wiil uu dhalay iyo rag sare oo dawladdiisa ahaa,waxaana kamid ah Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha.
Waxaana kasoo qayb galay muxaamiin(looyaro),waxaase jira qaar badan oo banaanka taagan oo soo gali kari waayay oo ka mid ah qareenadii difaaca.
Waxaa kaloo banaanka taagan taageerayaashii madaxweynaha iyo kooxihii mucaaradka ku ahaa,waxaa kaloo jooga ciidamo farabadan oo wata dabaabado iyo ciidamo si gaar ah loogu diyaariyay inay nabad galyada sugaan.
Kiiska ugu weyn haddii lagu helo waa dil kaasoo eedda ah ciddi bixisay amarka xoogga loogu isticmaalay dadkii mudaharaadayay ama rabshadaha kudhintay ee ay isaga hor yimaadeen ciidanka iyo dadkii kacdoonka waday.
Somalia:Madaxwene Sharif oo dalka kusoo noqday & Warbixin Socdaalkiisa ah – Hiroshima University to study low-level exposure